How kuvandudza mhuri ukama? Kufanana Amai zvakawanda zvinogutsa, Mwana zvikuru akanaka uye Dady zvikuru vanofara? Tadii kuchengeta pati? Ndapota musafunganya, BVC achakubatsira kupedzisa mabasa ose yakachena. .
Une mijenya shamwari uye tinoda kuziva kwavari, wadii kushamisa wavo nemitambo ine BBQ bato? Usarega imba yenyu sviba kuwana munzira vachinakidzwa nguva yako nedzimwe shamwari dzakanaka. Heino hurongwa 5 danho kukubatsira kuchenesa imba yako - hapana kushushikana, chete nyore kuzadzisa mabasa.
Saka apo kutanga? Nokuti BBQ webato, vaenzi vachange kupedza nguva yavo kunze, saka inokosha nharaunda kuchenesa mumba vari pasuo, mumba, kicheni uye kuchimbuzi mupenyu. No vanofanira kuchenesa imba yose asi omerera webato nzira - vanhu vakawanda kufunga ichava pamabwendefa, echiShinto uye nzvimbo kuisa zvinwiwa zvavo.
Its nyore, chete 5 matanho:
1. Fresh & Declutter mufurati renyu.
Usati watanga, uvhure mahwindo mashoma zvinenge kubuda mumba mako saka Rinofembedza yakanaka uye yakachena. Abatidza zvemiti inonhuhwirira kenduru kana spraying nzvimbo yako deodoriser anowedzera mamwe zvakanaka uye anogadza kumunetsawo. Next inguva vazoita chero nzvimbo bato nzira kuti vanonyanya ungwandangwanda hwezvinhu. Kuwana pfupi nzvimbo kuisa zvose zvisingakoshi zvinhu sezvinoita yokuwachira tswanda kana urwisane yokuchengetera izvi kusvikira bato iri pamusoro ndiyo yakanakisisa uye nyore mhinduro.
2. Geza Gate wako Door uye Entrance
Chokutanga vaeni enyu achaona ari mukova wako saka zviri zvinokosha kuita zvakanaka kuororwa. Itai kukurumidza kutsvaira panze, kutanga kubvisa chero tsvina. Uitewo nzira yako mukati uye kuita kutsvaira kumativi enyu pamusuo horo, kubvisa chero marara uye kuisa shangu, Mabhachi, heti uye tsamba kubva pameso. Guruva matafura kana decoration zvinhu uye mwaya zvimwe deodoriser.
3. Prepping yokutandarira
Start kuburikidza kunhonga chero panzvimbo zvinhu, kuswatura nepanhovo, pamakusheni, nezvifukidzo uye refolding runodzingira (kukuru kuvanza chero echitema - zvisinei musingadi kuita izvi mushure kushandisa chero BVC zvigadzirwa) . Next kuchenesa tafura, TV chidzitiro nezvimwe huruva hukawanika nekushandisa microfiber jira. Pakupedzisira, Vacuum kumusoro chero guruva kana dzinovaraidza bvudzi pasi, uye usakanganwa kuchenesa renyu skirting mapuranga uchishandisa wako Vacuum kuti mumakwenzi kana hosipaipi kuda.